Ngoku ungabelana ngeKhadi leApple nosapho lwakho: IKhadi leApple usapho | Ndisuka mac
Ngoku ungabelana ngeKhadi leApple nosapho lwakho: Usapho lweKhadi leApple
Eyokuqala yeenkonzo eziboniswe nguTim Cook namhlanje kumsitho wentwasahlobo we-Epreli 20: Usapho lweKhadi leApple. Ngombono wokuba iintsapho zizinzile kwezoqoqosho kunye ne-Goldman Sachs ally, esi sibonelelo sitsha semali siqalisiwe esiya kuthi ngokuqinisekileyo sibonwabise abasebenzisi baso.
U-Apple namhlanje utyhile into entsha ebizwa ngokuba yi "Apple Card Family" kumsitho wayo "olayishwe ngentwasahlobo", ovumela abasebenzisi yabelana ngeKhadi leApple elifanayo namanye amalungu osapho nge-iCloud.
Umnini wekhadi le-Apple unokumema abanye abantu ukuba babelane ngamakhadi abo kwaye bagcine umkhondo weendleko zabo bonke abantu kwi-Wallet app. Unokuseta umda wokuchitha kumsebenzisi ngamnye kusapho ukuba baneminyaka eli-13 ubudala okanye ngaphezulu, Kwaye kuyakubakho ukhetho olunikezelweyo kubazali lokulawula inkcitho yabantwana babo. Ulawulo lwabazali oluya kuza luncedo, kunjalo.
Abasebenzisi beKhadi le-Apple baya kuba nakho khetha phakathi kweentlobo ezimbini ezahlukeneyo zokwabelana. Ngo "Vumela inkcitho kuphela", abasebenzisi abamenyiweyo abayi kuba nakho ukufikelela kubhalansi iyonke, useto kunye nembali yentengiselwano. Ukuvumela la manqaku kumalungu amenyiweyo, umnini wekhadi kufuneka akhethe ukhetho "Yibani ngabanini babambisene."
Olu luvo lujolise ekubuyiseni indlela abantu abatshatileyo, amaqabane kunye nabantu obathembileyo, yabelana ngamakhadi etyala kunye nokwenza ikhredithi kunye. Indlela yokuba noqoqosho olusempilweni ngaphaya kwethu.
UJennifer Bailey, usekela-mongameli we-Apple Pay ka-Apple, uphawule wathi “Usapho lweKhadi le-Apple lwenza abantu bakwazi ukwakha imbali yakho yamatyala idibene ngokulinganayo. »
Sele siyazi ukuba e-US izinto zahluke kancinane kunaseSpain okanye eYurophu. Okwangoku oku kusebenza, ngokusengqiqweni Iya kunikwa kuphela kwilizwe laseMelika. Okwangoku asinayo i-Apple Card nathi kwaye sicinga ukuba kuya kuthatha ixesha ukufika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ngoku ungabelana ngeKhadi leApple nosapho lwakho: Usapho lweKhadi leApple
Ekugqibeleni sineeApple AirTags
Ifowuni entsha ye-12 emfusa ekuthengisweni kwangaphambili ngoLwesihlanu